Ukuthumela imiyalezo ngefowuni kuza ngamandla! | Martech Zone
Ukuthumela imiyalezo ngefowuni kuza ngamandla!
NgoMgqibelo, ngoMeyi 3, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
I-Wirefly Kutshanje kwenziwe uvoto lwabasebenzisi beMfonomfono kwaye bafumanise ukuba iipesenti ezingama-64 zabasebenzisi beselfowuni abayisebenzisi imiyalezo ebhaliweyo. Njengoko bendiphanda le posi, ndothuswa ziziza ezimbalwa ezazikho ebanjwa nge amanani.
Mhlawumbi ndingumsebenzisi okhulileyo kunabanye beeblogger abagqabazayo, kodwa bendimangalisiwe ngenxa yesizathu esahlukileyo. Ndamangaliswa kukuba iipesenti ezingama-65 zabasebenzisi ngokwenene wenza sebenzisa imiyalezo ebhaliweyo. Mhlawumbi kungenxa yokuba ndigqibe iminyaka engama-40 kodwa… ngenene? Kufana nokothuka ukuba iipesenti ezingama-35 zabasebenzisi beefowuni azikaze zisebenzise umatshini we-telegraph.
Ipesenti yabasebenzisi beefowuni eziphathwayo abathumeli myalezo kuba befumanise ukuba banako ngokwenene kuthetha kwibhokisi encinci ephathekayo ngexesha lokwenyani nomntu kwelinye icala. Kwaye akukho mfuneko yokuba bazicinezele izithupha zabo ukuze benze njalo. Ewe, ukuthumela imiyalezo kungangena xa ufuna ukwahlukana nomntu kodwa ungafuni ukuthetha nabo.
Ndiyahlekisa kunjalo, ndiyathanda ukuthumela imiyalezo. Abantwana bam babhalela abahlobo babo ngokungapheliyo kwaye ndiyayixabisa xa bendithumela imiyalezo kwintlanganiso kunokuba banditsalele umnxeba. Ukuthumela imiyalezo kuncinci kakhulu kwaye ngokukhawuleza. Kwaye iyenyuka.
Amashishini ebetsala nzima nento yokwenza neselfowuni okwangoku. I-buzz kwishishini leenkonzo zokutya yindlela abaxhasi abaphendulayo abasebenza ngayo kwiitoni ezisekwe kwisicatshulwa kunye nezilumkiso. Ndidibene noAdam Small, uMongameli we Umbhalo ngesicelo, ngale ntsasa kwaye uAdam wathambisa umbongo kwizinto ezinomdla kakhulu ezizayo ezantsi kombhobho.
Umbhalo ngesicelo sele unomdla wokusebenzisa. Omnye wabo unikezela abasebenzisi beMarathon ixesha labo lokuphela ngokuba babenombhalo kwinombolo yabo yobhaliso. Akukho sidingo sokulinda ude ufike ekhaya ukujonga ixesha kwiPC yakho!
UAdam uqhubeke nokuchaza iSMS ngokuchasene neMMS. Phi i-SMS (Inkonzo yeMiyalezo emifutshane) ivumela abalinganiswa abali-160 ukuba babuyiselwe, MMS (Inkonzo yeMiyalezo yeMultimedia) ivumela imifanekiso, ividiyo kunye nesandi ukuba sithunyelwe ngapha nangapha.
Njengababoneleli beeMfono baqhubeka ukuphucula amanethiwekhi abo ngokukhawuleza (umz 3g, iguqulelwe = isizukulwana sesithathu) kunye neefowuni eziphathwayo ziyaqhubeka nokukhulisa izikrini zazo ngezigqibo eziphezulu, oku kunokuvula imakethi!
Endaweni yokuthumela umyalezo obhaliweyo ku tyhala intlanzi ngesidlo sasemini, mhlawumbi ungathumela ividiyo emfutshane kumphathi osemsebenzini okanye ividiyo emnandi yesitya ngokwaso! Unokudlulisa isigqebhezana esenziwe ngokwezifiso usebenzisa itekhnoloji yeebhakhowudi yakutshanje ukuze umthengisi atshangatshaze umfundi phambi kwefowuni ukuhlawulela iphetshana.
UAdam wabelane ngetekhnoloji eyongezelelweyo enomdla kum engenayo imvume yokwabelana apha (okwangoku), kodwa ndikhangele phambili ekuboneni nasekusebenziseni.
Ngaba ukuthumela imiyalezo kungena simahla?
Ndibuze kuAdam ukuba ucinga ukuba amaxabiso azakutshintsha ukuthumela imiyalezo apha eUnited States (ukuthumela imiyalezo kwamanye amazwe kuhlala kusimahla) kwaye wathi akanathemba. Ujongo olunye kumthamo wogaxekile kwibhokisi yakho engenayo ucacisa ukuba kutheni… ukuba ukuthumela imiyalezo kungabizi mali, iifowuni zethu ziya kugcwalisa ngoku sithethayo!
tags: urhwebo mobileIifowuni zesmsi-SMSukuthengisa ii-smsukuthengisa imiyalezoukuthumela imiyalezo
I-Patronpath ivula ubukho beWebhu eNtsha
Meyi 3, 2008 kwi-11: 58 PM
Meyi 4, 2008 kwi-6: 55 AM
Meyi 4, 2008 kwi-3: 52 PM